crunch နဲ႔ word list ဖန္တီးျခင္း - Khit Minnyo
Unlabelled crunch နဲ႔ word list ဖန္တီးျခင္း
crunch နဲ႔ word list ဖန္တီးျခင္း
Crunch can createawordlist based on criteria you specify. The output from crunch can be sent to the screen, file, or to another program.
Usage: crunch [options]
Please refer to the man page for instructions and examples on how to use crunch.
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ ဗားရှင်းကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
where min and max are numbers လို့ ဖော်ပြထားတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ကို အသုံးပြုရမယ့် ပုံစံကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါပြီ။
root@kmn:~# crunch45 abcdef123456 -o /root/Desktop/word_list.txt
ကျွန်တော်က အထက်ပါအတိုင်း ရိုက်လိုက်တာပါ။ ဒီ command ကို ရှင်းပြရရင်
crunch ဆိုတာက crunch ကို အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ် tool မဆို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သူ့ကို ရှေ့ထား ရေးရတာမို့ အထွေအထူး မပြောတော့ပါဘူး။ သူ့ အသုံးပြုပုံမှာလည်း ပါပါတယ်နော်။
45ဆိုတာက သူ့ အသုံးပြုပုံမှာ ရေးထားတဲ့အတိုင်း min max ကို သုံးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်က အမြန်ပြီးအောင်လို့4လုံးကနေ ၅ လုံးအထိပဲ သတ်မှတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ facebook တို့ Gmail တို့လို secure ဖြစ်တဲ့ password တွေမှာတော့ အနည်းဆုံး ၈ လုံး ကနေ စ ရပါတယ်။
abcdef123456 ဆိုတာကတော့ standard form ပါ။ စာရော ကိန်းရော ၂မျိုးလုံး ရောပြီး အသုံးပြုမယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
-o ဆိုတာကတော့ Output file ထုတ်မယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
/root/Desktop/ ဆိုတာကတော့ ထွက်လာမယ့် ဖိုင်ကို Desktop ပေါ်မှာ ထားမယ်ဆိုတာကို ပြောပြတာ ( Directory ) ဖြစ်ပါတယ်။
word_list.txt ဆိုတာက ထွက်လာမယ့် ဖိုင်နာမည် ဖြစ်ပါတယ်။ သတိထားရမှာက ဖိုင်နာမည်မှာ space မခြားရပါဘူး။ နာမည်ကို ကိုယ်ကြိုက်တာပေးနိုင်ပေမယ့် နောက်က .txt တော့ ပါဖို့ လိုပါမယ်။
ခုလောက်ဆို command တွေကို နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ အထက်ပါအတိုင်း ရေးပြီး enter ကြည့်လိုက်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး 100% ပြီးဆုံးလို့ terminal နောက်တစ်လိုင်း ကူးသွားတာနဲ့ တပြိုင်နက် Desktop ပေါ်မှာ ခုန ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးလိုက်တဲ့ txt ဖိုင်လေးကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Double click နှိပ်ပြီး ဖွင့်ကြည့်ကြည့်ပါ။ လေးလုံးကနေ ငါးလုံးအထိ passwords တွေကို မျက်စိတညောင်း တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင် Passwords5လုံးထိပဲ ရှိပါသေးတယ်။
Crunch will now generate the following amount of data: 1596672 bytes
1 MB size ကတော့ ဒီလောက်လေးမို့ အဆင်ပြေပါတယ်။
Crunch will now generate the following number of lines: 269568
root@kmn:~# crunch 8 12 abcdef123456 -o /root/Desktop/word_list.txt
Crunch will now generate the following amount of data: 125561964920832 bytes
၈ လုံးကနေ ၁၂ လုံးအထိအတွင်း passwords တွေကို word lists ထုတ်ရင်တော့ အထက်ပါအတိုင်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ GB 116938 လိုအပ်ပြီး 2TB external HDD ပေါင်း ၅၇ လုံး လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ် :)
ဒါကြောင့် words list ကို သုံးတဲ့နေရာမှာ ခန့်မှန်းပြီး လုပ်ဆောင်တဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို ရှေ့မှာ ဖော်ပြ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မဖတ်ရသေးသူများ ခန့်မှန်း wordlist အကြောင်း တင်ထားတာ ရှိပါတယ်ဗျ
ဒီစာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပြီး သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်ဗျ